Qof loo soo xiray xabaddo horey uga dhacay xaafadda Bergsjön ee magaaladda Göteborg | Somaliska
Qof loo soo xiray xabaddo horey uga dhacay xaafadda Bergsjön ee magaaladda Göteborg
Nin ayaa loo soo xiray maanta oo khamiis ah isku day dil oo fashilmay oo ka dhacay hortaantii bishaan xaafadda Bergsjön ee beriga Göteborg. Ninkan la soo xiray ayaa lugu eedeeynayaa in uu doonayey inuu dilo labbo nin oo qeyb ka ah qalalaasaha xaafadahaasi ka jira.
Labbadan nin ee la dhaawacay ayaa u sheegay wargeyska Göteborgs Posten in ay halkaasi u tageen soo qaadashada mooto laga dhacay, balse ay ka war heleen xabado lala beegsaday. Dacwad oogaha lugu magacaabo Stina Lundqvist, ayaa sheegtay in ninkaan oo 24 jir ah lugu eedeeynayo inuu ka dambeeyey ridista xabadaha. Balse ka gaabsastay ineey ka jawaabo su,aal la xirriirtay in haddii ay jiraan kuwo kale oo la tuhunsan yahay ku lug lahaanshahooda falkaas.
Ninkan xaatan saldhiga la gaayey ayaa iska fogeeyey eedeymaha loo heeysto, hase ahaatee waxaa uu ka mid yahay shabakadaha keriminaalka ah ee xaafaddas. Bergsjön waxaa ay ka mid tahay xaafaddaha ajaanibta u badan yahay ee mudooyinkii dambe falal amaam darro ahi ka dhaceen, sidaas si la mid ah ayaa xaafadda Frölunda waxaa ayaa iyana ka dhacay dilal iyo isku dil oo dhex maray kooxo keriminaalka ah.